PeaZip 4.8 Misy | Avy amin'ny Linux
PeaZip 4.8 Azo alaina
Salama tsara ho an'ireo mpamaham-bolongana namana rehetra. Miala tsiny aho noho ny tsy nahitako ny fotoana lava sady nahatonga ny fandraisako hevitra no naneho hevitra, niatrika olana aho.
avy amin'ny Fampiharana KDE Nampandrenesina anay ny amin'ny fisian'ny PeaZip amin'ny kinova 4.8 miaraka amin'ny fanatsarana isan-karazany. Tokony hotadidintsika fa ny PeaZip dia fitaovana iray ahafahantsika mamoaka endrika malaza maro ary manana tombony ho "tsy miandany" raha ny birao no jerena, satria ny fampifanarahana sary mirindra dia ampiharina ho an'ny QT sy GTK.
Nalaina tao amin'ny KDE-apps.org
Ny sasany amin'ireo zava-baovao atolotray amin'ity kinova vaovao ity dia:
Andraikitra fitantanana rakitra vaovao.
Fampiasana vaovao handaminana abidia.
Hatsarao ny fampidirana mailaka.
Tokony holazaiko fa ny hany fotoana nampiasako azy dia tena nahafinaritra ahy ny zavatra niainako. Raha ny marina dia tsy hitako izay antony nijanonako tamin'ny fampiasana azy ary heveriko fa hametraka azy indray mandeha indray aho. Izy io dia mitantana endrika maro ary ny tsara indrindra dia ny fanaovana azy tsara.
Raha hametraka ao amin'ny distro tianao indrindra dia afaka mitsidika ianao Fampiharana KDE izay hahitanao ireo fonosana sy portable mifanentana aminy. Na tsidiho fotsiny eto ny tranokalan'ny tetikasa raha mila fanazavana fanampiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » PeaZip 4.8 Azo alaina
Efa elaela aho no nanandrana nanolo File-roller tsy nisy fahombiazana, indrindra noho ny hafainganana sy ny fampidirana. Tsy fantatro ireo fampiharana maro izay manome anao ny safidy eo anelanelan'ny GTK sy QT.
Tiako ny 7zip, tsara izany, na dia mampiasa wxgtk aza izy, toa ahy ny fisehony graphiac, saingy mandeha tsara izy io.
Azo antoka, resaka tsiro daholo izany. Rehefa nampiasa PeaZip aho dia tiako be izany, raha ny tena izy dia natolotro ho an'ny namana iray ary napetrany tao amin'ny Windows izany ary na eo aza ny fotoana dia niantso azy aho androany ary nanontany azy momba ilay programa ary nilaza tamiko izy fa mbola mampiasa azy io.
Araka ny nolazaiko, ny zavatra rehetra dia mipoitra amin'ny resaka tsiro.
Iray amin'ireo fangatahana kandidà ny tsy fampiasana vahaolana avy amin'ny fonosana gnome na kde rehefa mampiasa manager windows windows na mampiasa sehatrasa birao hafa izahay. Tsara.
Mety ilaina amin'ny tetikasa iray ananako 😀
Tsy fantatro ity programa ity, tsy maintsy andramantsika izy fa tsara be izany.
Manolo-kevitra izany ho an'ny mpampiasa Windows foana aho, noho izany dia ataoko tsy hisoroka ny winrar piraty sy ny compresseur hafa izy ireo.
Miaraka amin'ny Terminal: Mampiasa fomba fiteny mahazatra
Biometrika Ny hoavin'ny fanamarinana?